ပန်ဒိုရာ: ညီအစ်ကို မသိတသိ
ကျွန်တော် ကျောင်း အေးအေးဆေးဆေး တက်နေချိန်မှာ အစ်ကိုက အိမ်စီးပွားရေးမှာ ၀ိုင်းလုပ်နေခဲ့ပါတယ်။ သူ့ကြောင့် ကိုယ်က အဆင်ပြေသွားပေမယ့် သူကတော့ ဒုံရင်းပါပဲ။ အစ်ကို့ဆီ ဒီစာလေးပို့လိုက်ပါမယ်။
ဘာပြောရမှန်း တောင်မသိတော့ လို့ ဘာမှ မပြောတော့ ဘူး။
ကိုအန်ဒီ > ဒီလိုပဲ တိုက်ဆိုင်တတ်ပါတယ်
ပုံရိပ် > မပြောလည်း သိပါပြီ. အဟဲ
ဆရာမ > ဘာသာပြန်မဟုတ်. ပင်ကိုယ်ရေးပါ အဟဲ. အသုံးအနှုန်းတွေ ထောင့်နေလို့ထင်တယ်.. တွေးစရာတွေ ရတယ် ဆိုလို့ ၀မ်းသာပါတယ်..
မပန်ရေ ... ညီအစ်ကိုမသိတသိ ကို လာလာဖတ်တာ ခဏခဏပဲဗျ ..အသစ်တွေလာဖတ်ရင်းလည်း ထပ်ထပ်ဖတ်ဖြစ်တယ် ...
မသိတသိနဲ့ ဖတ်ရင်း ..ဖတ်ရင်းနဲ့ သိသလိုလို .. မသိသလိုလို ... အဲဒီလိုနဲ့ပဲ ' ဖတ် ' ချာလည်နေတာဗျ ... အဲဒီအရသာကလည်း တမျိုးဗျနော် ... ကျေးဇူးဗျာ ... အသံမပေးခဲ့ပေမဲ့
ကျနော့်အတွက်တော့ အသက်ကြီးလာလေ ... အခွံတွေ ပျော့လာလေ ... လိမ့်မချဖြစ်တဲ့ တောင်ကုန်းတွေလည်း မြင့် မြင့်လာလေ ပဲဗျာ ...
ကိုမိုးညို.. ဒီကဗျာကို ခံစားတဲ့လူ တစ်ယောက် ရှိသေးတယ် ဆိုလို့ ၀မ်းသာမိပါတယ်